Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka iyo xubna ka mid ah jaaliyadda Doxa oo ka shiray arima muhiim ah
Maamulka iyo xubna ka mid ah jaaliyadda Doxa oo ka shiray arima muhiim ah
Iyadoo dalka Qatar looga dabaadagayay 18ka bisha Dec. sanadguuradii xuriyadooda, ayaa waxaa shir isug yimid habeenimadii maamulka jaaliyadda Doxa iyo xubna ka mid ah jaaliyadda. Shirkan oo ka mid ah shirkaka dunida dacaladeeda uga socda jaaliyadaha S.Ogadenya ayaa looga arinsanayay arimaha quseeya halganka, waxaana lagu furay wacdi diini ah oo laga dhagaystay Sheekh M. Cabdulaahi, ka dibna waxaa la gudagalay ajandihii shirka oo ka koobnaa xogwaran iyo siyaabihii halganka looga qayb qaadan lahaa.
Waxaa shirka ka soo qaybgalay Hogaanka Warfaafinta JWXO oo wararkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka iyo goobaabo ku saabsan geedi socodka halganka iyo heerka uu marayo ka waramay.
Intaa ka dib waxaa shirka kaga soo qaybgalay khadka teleefoonka gudoomiyaha Ururka Ardayda iyo Dhalinyarada Ogadenya (OYSU) mudane Mujaahid Sh Ibraahim oo warbixin aad u qiimi badan siiyay xubnihii shirka fadhiyay. Wuxuu Mujaahid ka warbixiyay heerarkii kala duwanaa ay soo mareen dhalainta iyo ardayda Ogadenya ee dunida dacaladeeda ku hanaqaaday. Wuxuu ka warbixiyay guulaha uu soo hoyiyay ururka OYSU mudadii yareyd uu dhisnaa isagoo sheegay in meela badan oo dunida ah lagu martiqaaday xubna ka socda ururka si looga dhagaysto xogta dhabta ah ee ka jirta Ogadenya. Wuxuu mudane Mujaahid sheegay inay Itobiya aad isugu dayday inay ururka dhalinyarada ku kala furfurto qabiil iyo laaluush taasoo ay ku hungowday. Wuxuu gudoomiyaha OYSU uga waramay jaaliyadda qorshaha ururkiisa inta ka hadhay sanadka iyagoo ku qaban doona magaalada London bishan gudaheeda Q2aad ee barnaamijkii SilentCry oy ka soo qaybgali doonaan xubno badan oo ka kala socda saxaafadda caalamka iyo ururada xuquuqul insaanka. Waxaa kaloo uu sheegay gudoomiyaha OYSU inay u sii jeedaan shirweynaha ururka OYSU oo dhici doona dhamaadka bishan.
Ka dib wuxuu ku wareejiyay halgame Bashiir Gurey oo ka mid ah xubnaha asaasay ururka OYSU isla markaana ah dhalinyarada wada barnaamijka Ileys qaybtiisaLondon. Halgame Bashiir wuxuu si fiican isaga uga warbixiyay kaalinta warbaahinta ay ka qaadato halganka.
Ugu dambayntii waxaa lagu soo gunaanaday shirka in qaybta ay kaga jirto halganka jaaliyadda Doxa kor loo sii qaado.